Ahoana No Namolavolan’ny Fifandirana Ny Fomba Fitantarana sy Ireo Mpilaza Tantara · Global Voices teny Malagasy
Ahoana No Namolavolan'ny Fifandirana Ny Fomba Fitantarana sy Ireo Mpilaza Tantara
Voadika ny 14 Desambra 2017 7:13 GMT
Ahoana no hamolavolan'ny Fifandirana ny Filazana tantara sy ny Mpilaza Tantara – Joey Ayoub, Luis Carlos Diaz, Sahar Habib Ghazi, Raisa Wickrematunge ary Ieshan Wani.
Nandritra ny Fihaonambe Global Voices tao Sri Lanka no nizaran'ny Bilaogera efatra ny traikefany amin'ny fitatiterana raharaham-pifandonana. Narindran'i Sahar Habib Ghazi, Lehiben'ny tonian-dahatsoratry ny Global Voices ny adihevitra.
Joey Ayoub, Tonian-dahatsoratry ny faritra MENA (Afovoany Atsinanana sy Afrika Avaratra) ao amin'ny Global Voices sady mpanorina ny Hummus for Thought, nisaintsaina momba ny fitaterany ny ady tany Siria, izay nofaritany ho “nilaozana.”
Nosoritany fa mila mahafantatra sy mitatitra ny zava-mitranga eny ifotony amin'ny alalan'ny fiarahamiasa amin'ny aterineto ny olona. “Tsy mifantoka amin'ny jeopolitikika izahay, fa amin'ny tantaram-piainana sy feo isan'olona manasongadina azy ireo,” hoy ny fandinihany.
Ny fanoratana mikasika ny fifandonana ao Syria dia mety hanirery sy hanelingelina; Nanantitrantitra i Ayoub fa ilaina ny hodidinina namana sy mpiara-dia izay afaka manome fanohanana. Tamin'ny famaliana fandotoan-dresaka, nilaza izy fa tokony hampahatsiahy ny tenany ny tsirairay fa azo inoana sy marina ny tantaran'ny tena, raha misy ny voatafika anaty aterineto, na dia mahatonga ny hafa tsy mahazo aina aza izany.
Luis Carlos Diaz, mpanao gazety Venezoeliana sady mpikatroka aterineto, niady hevitra momba ny maha-zava-dehibe ny fahatakarana olona, ​​ary mahita fa tsy irery ianao ao amin'ny tontolo nomerika. Ny fihetseham-po izay nofidianao haseho, hoy izy nanamarika, dia matetika zava-dehibe kokoa noho ny vaovao zarainao.
Nampiany hoe: “Ny Aterineto dia toy ny sobikan-doharanom-baovao; fa mila maka olona iray hanome anao ny fijoroana vavolombelona tsara indrindra sy mahomby ianao.” Tokony hilaza tantara manampy ireo olona mijaly isika, no sady mitandrina tsara mba tsy hanimba azy ireo indray.
Raisa Wickrematunge, mpanao gazety Sri Lankey sady tonian-dahatsoratra ao amin'ny Groundviews, nanamarika fa tsy tarehimarika ny tantaran'ny ady, fa tantaran'ny olombelona. Nanazava ny fomba fijery, ny famolavolana sy ny famokaran'ny Groundviews ireo tantara ao anatiny sy avy amin'ny fifandonana mahery vaika izy: “Miverina izahay ary hiverina foana izahay.”
Herintaona taorian'ny nahavitan'ny ady an-trano tany Sri Lanka, nanangona antontam-peo, lahatsary, tantara sy fanehoan-kevitra, ny fihetseham-pon'ny vahoaka, nandritra ny herintaona teo ho eo ny fikambanany – tafiditra ao anatin'izany ny setriny nataon-dry zareo tamin'ireo tranga mampalahelo. Nanamarika i Wickrematunge fa na dia efa tsara kokoa aza noho ny teo aloha aza ny toe-draharaha, mbola misy hatrany ny ahiahy, ary mikasa handinika ireo feo tsy mba re ny fikambanany izay mailo hatrany.
Mpanao gazety Kashmirita, Ieshan Wani kosa nanamarika fa ny fifandirana ao Kashmir no zokiny indrindra manerana izao tontolo izao, ary mihoatra ny 10.000 ny olona tsy hita. Namariparitra ny fandrahonana ara-batana ankehitriny mihatra amin'ireo mpanao gazety ao amin'ny faritra izy, amin'ny fampiasana ny teny hoe “famoretana” mba hanoritsoritana ny zava-iainana ao Kashmir amin'ny fahalalaham-pitenenana. Niresaka momba ny fanamby amin'ny fanaovana ny rariny manoloana ny fanaintainana sy ny fijalian'ny tsirairay izy – raha miresaka momba ny ranomason'ny lahiantitra iray.